HTCdev အသုံးပြုနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့လမ်းညွှန် | Androidsis
ကထောက်ခံအောက်ပါပို့စ်တွင် ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာငါဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာပြမယ် HTCdevတစ်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ အခမဲ့သင်လိုအပ်သောကိရိယာများ များစွာသော HTC ဆိပ်ကမ်းများ၏ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပါ.
ထို့အပြင်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည် အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များ သော့ဖွင့်၏အလုပ်ရရန် bootloader ကို ဆိပ်ကမ်း၏အကောင်းတစ်အရေအတွက်ကနေ။
ပထမဦးဆုံး HTCdev ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ y အတည်ပြုချက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ထဲမှာ လင့်ခ် သင့်အီးမေးလ်သို့ပို့သည်
ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုရှိပါ လိုက်ဖက်တဲ့ HTC သင်တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့ရမည့်ကိရိယာများစာရင်းနှင့်အတူ HTCdevထိုနည်းတူ၊ USB debugging enabled, ဒီ option ကိုအပိုင်းရှိကိရိယာချိန်ညှိချက်များမီနူးတွင်တွေ့နိုင်သည် လျှောက်လွှာများ / ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု.
Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ဖို့အတွက်ဖုန်းရဲ့ Battery ကမဖြစ်နိုင်ဘူး ဘယ်တော့မှ ၃၀% အောက်ဘယ်တော့မှမလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်တာဝန်ခံအစီအစဉ် Bootloader ဖွင့်ပါ ဒါကသင့်ကိုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။
ဗီဒီယိုနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအကြံဥာဏ်အားလုံးကိုလိုက်နာပါ HTCdev, အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေရင်၊ သင်တစ်ခုခုကိုနားမလည်ရင်၊ ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန် မိတ္တူကူးထည့်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းအရာကိုဘာသာပြန်ပါ။
သော့ဖွင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းသင်ဖြစ်ကြသည် မိုဘိုင်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါ, HTCdev တပ်ဆင်သည့်ပရိုဂရမ်မှလုံးဝထွက်ခွာရန်၊ USB ကြိုးအားကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ရန်အကြံပြုသည်။ ထို့နောက်ပရိုဂရမ်ကိုထပ်မံလည်ပတ်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်စပါ။
ဤဒုတိယကြိုးပမ်းမှုနောက်တဖန်မအောင်မြင်ပါကလုပ်သင့်သည် ပြန်လည်ထည့်သွင်း ၏ယာဉ်မောင်း HTC က ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် HTCsync.
ခင်ဗျားဒီမှာဒီမှာဘယ်လိုပံ့ပိုးမှုရှိတယ် အဆိုပါသင်ခန်းစာအသေးစိတ်ရှင်းပြသည် နှင့်အသေးစိတ်နှင့်အတူထောက်ခံခဲ့ကြသည် screenshots များ ထွက်သယ်ဆောင်ခံရဖို့လုပ်ငန်းစဉ်၏။
ထည့်သွင်းပါပြီ Android SDK, အဆိုပါ Java JRE y HTCsyncဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဤသုံးပါးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် bootloader unlocking လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီတွင်သင်ထပ်ခါတလဲလဲပြproblemsနာတက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်းပြီးဆုံးမည်မဟုတ်ပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - များစွာသော HTC ဆိပ်ကမ်းများ၏ Bootloader ကို HTCdev ဖြင့်သော့ဖွင့်နည်း, HTCdev ကို သုံး၍ HTC Terminal များ၏ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း
ဒေါင်းလုပ် - Android SDK, အဆိုပါ Java JRE y HTCsync
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTCdev အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
လမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုက bootloader ကိုသော့ဖွင့်လိုက်ခြင်းကသင့်ကိုဖုန်းအာမခံချက်ဆုံးရှုံးစေသလား။
sergio mtz ဟုသူကပြောသည်
amigooooo ငါရူးနေပြီ၊ မေးလ်ကလာတဲ့သော့ဖွင့်ကုဒ်ကမဖွင့်ဘူး။ ငါကသော့ဖွင့်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ် .. ငါက Mac ပေါ်မှာပေါ့
sergio mtz အားပြန်ကြားပါ
LG Optimus 3D root လုပ်နည်း
Android ထုတ်ကုန်များကို iTunes နှင့်မည်သို့စည်းညှိရမလဲ